အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ရခိုင်ပြည်ကို တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ လောင်းရိပ်အောက်ကို ဆွဲသွင်းပါက လုံးဝသည်းခံမည် မဟုတ်ဟု ဒေါက်တာအေးမောင် သတိပေး
ရခိုင်ပြည်ကို တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ လောင်းရိပ်အောက်ကို ဆွဲသွင်းပါက လုံးဝသည်းခံမည် မဟုတ်ဟု ဒေါက်တာအေးမောင် သတိပေး
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ လောင်းရိပ်အောက်ကို ဆွဲသွင်းပါက အနောက်ဖက် တံခါးကို စောင့်ရှောက်နေသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် လုံးဝ သည်းခံမည် မဟုတ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က အမျိုးသားရေး လက္ခဏာနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဆွေးနွေးပွဲတွင် သတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။
"ရခိုင်ရေမြေနှင့် နယ်မြေတွေကို တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်ကို ဆွဲသွင်းမည်ဆိုရင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ လုံးဝသည်းမခံဘူး" ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ ထိမ်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အမျိုးသား လက္ခဏာများ မပျောက်ရေးတာဝန်မှာ ပြည်ထောင်စု တစ်ရပ်လုံးတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ဒေါက်တာအေးမောင်က ရှင်းပြသည်။
ဘင်္ဂါလီ လူဦးရေ တိုးပွါးမှု မြင့်မားလာမှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အမျိုးသားလက္ခဏာကို ခြီမ်းခြောက်နေပြီလောဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများမှာ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြကြောင်း ၄င်းက ပြောကြားသည်။
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု တစ်ခုဖြစ်သော ကမန် လူမျိုး နှစ်သောင်းခန့်ကို မှီကာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး သုံးသိန်းခန့် လူမျိုးရေး ၀ါးမျိုမည့် အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ဒေါက်တာ အေးမောင်က ဆိုသည်။
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက ၄င်းတို့ကို နိုင်ငံသား အဖြစ်သတ်မှတ်ရန် ၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုထားကြပြီး
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရှိသော လူဦးရေ တစ်ဝက်ကျော်သည် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂါလီများ ယင်းသုိ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်တောင်းဆိုထားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅မျိုးတွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးမပါဝင်ပေ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ်စဉ်များကို သေသေချာချာ ကိုင်တွယ် မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ရခိုင်လူမျုိုးများကို ဘင်္ဂါလီ များက တဖြည်းဖြည်း ၀ါးမျိုလာမည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အခြေအနေဖြစ်သည်။
ရခိုင် အရေး အလေးပေး ဆွေးနွေးသော အမျိုးသားရေး လက္ခဏာနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးပြောကြားနေသော
ဒေါက်တာ အေးမောင် ကိုတွေ့ရစဉ်
Rakhine Citizen Journalists.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:47 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook